stahtam 21/09/2015 07:17
Mamaly ny fanazavan'i Rafieritreretana i Stahtam:
Nitanisa versets amina boky 3 Rafieritreretana koa izao no mba hevitro
1°) "Jaona 4:22 Jiosy Izy":
Eny, nefa sady MPANJAKAN'NY JIOSY koa Izy koa amiko dia ny vahoakan'io Mpanjaka io no tena mahalala ny momba Azy tsara, fantany ihany koa ny anarany. Azo anampiana izany ny Jaona 11/51,52 satria ny faminaniana dia tena fantatry ny Jiosy tsara. Efa voalaza ao @ faminaniana anefa ny anaran'ny Mesia fa tsy Yahoshuah velively.
2°) "Salamo 68:5 Mitondra ny anaran'i Rainy izay antsoina hoe YAH, jereo ny Baiboly Hebreo"
Ny Baiboly hebreo izany hoe @ fiteny hebreo no nanoratana azy dia milaza anaran'ny Ray hafa ihany koa ankoatra ny hoe "YAH" toa ny hoe YAHO... ary mbola ny hebreo izay mahay ny teny hebreo ihany koa no mahay mampiasa ireo anarana ireo rehefa akambany amin'ny teny hafa ka tsy voatery ho ny YAH ihany no azo atsofoka anaty teny iray, ny lalàna fanakambanana azy koa dia ry zareo ihany no mahalala izany satria izy ireo no nomena ny Teniny ho adidiny (Salamo 147/19,20 sy Romana 3/1,2).
3°) "Asa 4:12 Tsy azo hovaina ny anaran'i Yahoshuah"
raha araka ny fanazavana 1°) izany dia niova ny anaran'ny Mesia.
4°) "Jaona 12:49-50 Izany teny izany dia lalàna, tsy azo dikaina"
Rehefa lalàna (fivavahana no resaka) tokoa dia tsy azo dikaina. Koa raha raisiko ny teny ampiasainao ilazana ny ivavahana hoe andriam... dia fandikan-dalàna ny fampiasana izany satria ny Malagasy taloha izay nolazaina fa mpanompo sampy no efa niantso izany ("hotahin'andriam... sy ny raz...") ka raha an'ny Grika (hafa firenena) ireto anarana ireto: Jésus, Jesoa, Jesosy, Zezo, Yesua... dia an'ny Malagasy koa ny "andriam...", iza no nantsoiny t@ izany fa ny anarana dia tsy azo ovaina?